Ividiyo: Yintoni iBrand?
NgoLwesibini, Juni 5, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Umbutho waseMelika wokuThengisa (AMA) ichaza uphawu njenge igama, isigama, uyilo, uphawu, okanye nayiphi na into echaza ukulunga okanye inkonzo yomthengisi eyahlukileyo kuleyo yabanye abathengisi.
Kunzima ukufumana imibuzo elula ngakumbi: Ungubani wena? Kutheni inkampani yakho ikhona? Yintoni eyenza wahluke kukhuphiswano? Kwaye okwangoku, leyo yeyona mibuzo inzima enokuphendulwa lishishini. Ngesizathu esihle, naye. Bahlasela intliziyo yeshishini, amaxabiso asisiseko kunye nenjongo ephambili. Kwaye ubukho bayo kwimarike yokhuphiswano.
Abantu Godfrey dibanisa le vidiyo ipholileyo ukuba luphawu luni:
Unokuzikhuphelela ikopi yePrinting PDF egcwalisiweyo apha.
tags: uhlobouphawu oluchaziweyoInkcazo yebrendiIgama loqhagamshelwano Godfreyividiyo ye-infographicyintoni uphawu